Luis Suarez oo ka hadlay mustaqbalka suurtogalka ah ee Lionel Messi – Gool FM
Luis Suarez oo ka hadlay mustaqbalka suurtogalka ah ee Lionel Messi
Dajiye October 10, 2020
(Madrid) 10 Okt 2020. Weeraryahanka kooxda kooxda Atletico Madrid ee Luis Suarez ayaa ka qeyb galay “90 Minutes of Football”, wuxuuna ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi.
Laacibka lixda jeer ku guuleystay abaal-marinta Ballon d’Or ayaa argagax ku riday dunida kubadda cagta markii uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka tago Barcelona suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaaga, iyadoo kooxo fara badan ay raacdo u galeen helitaanka saxiixa Lionel Messi, laakiin ugu dambayntii wuxuu iska sii joogay garoonka Camp Nou.
Luis Suarez ayaa wareysi uu siiyay wariyaha ka horwgala shabakada “ESPN” ee Pollo Vignolo, wuxuu kaga hadlay mustaqbalka Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Waxaan u maleynayaa in maamulka Barcelona ay doonayeen inay i saaraan, sababtoo ah waxaan xiriir wanaagsan la lahaa Lionel Messi”.
“Waxaa laga yaabaa inay doonayeen inuusan wax badan ila joogin, mana arki karo sabab ay ugu fikiraan inay taasi dhibeyso kooxda”.
“Way cadahay inaan u xiisay Messi, laakiin joogitaanka teknolojiyadda, waxaan u hadalnaa si joogto ah, sababtoo ah waxaa naga dhexeeya saaxiibtinimo adag oo waxyaabo badan ayaan wadaagnaa, carruurteena sidoo kale nolosha ayey wadaagaan, waxaa naga dhexeeyo xiriir qoys oo aad u wanaagsan”.
Intaas kaddib Luis Suarez ayaa ka hadlay mustaqbalka Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Waxaa suuragal ah in Messi uu u ciyaaro koox kale, laakiin haddii uu ku dareemayo farxad iyo raaxo markale kooxda Barcelona, isla markaana uu yimaado maamul kale, wuxuu doonayaa inuu sii joogo kooxda, saaxiib ahaan waan ku faraxsanaan lahaa haddii uu si fiican ushaqeeyo”.
Ugu dambeyntii Luis Suarez ayaa wax laga weydiisay suurtogalnimada uu ku xiran karo maaliyada kooxda Real Madrid, wuxuuna yiri:
“Aniga maa waalan…waxaan waligeey ku riyoonjiray inaan u ciyaaro kooxda Barcelona tan iyo markii aan yaraa, ma dabaaldegi doono haddii aan gool ka dhaliyo Barca, laakiin waxaan gacanteyda ku tilmaami doonaa goobta uu fadhiyo madaxweynaha kooxda ee Josep Maria Bartomeu”.
Arsene Wenger oo sheegay kooxda uu u arko inay tahay tan ugu fiican Yurub xilligan